बझाङकी पवित्रा काठमाडौमा मृत फेला, आफन्त भन्छन् आ' त्म'ह 'त्या होइन ह' त्या हो - News 88 Post
July 13, 2021 N88LeaveaComment on बझाङकी पवित्रा काठमाडौमा मृत फेला, आफन्त भन्छन् आ’ त्म’ह ‘त्या होइन ह’ त्या हो
काठमाडाैं । बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका ०५ की २३ वर्षिया पवित्रा गुर्धामी काठमाडौमा मृत फेला परेकीछन् । सोमबार काठमाडौ महानगरपालिका ०७ स्थित हेरिटेज बोर्डिगंको एउटा कोठामा उनि मृत फेला परेकी हुन् ।
विद्यालय स्रोतका अनुसार पवित्राले सोमबार करिब ३ बजे झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जनाईएको छ । दिउँसो करिब ३ बजे पवित्राले झुण्डिएर आ’ त्म’ ह’ त्या गरेको अवस्थामा आफुले भेटेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेस लिम्बु बताउँछन् । उनका अनुसार पवित्राले आफुबस्ने कोठाभित्र चुकुल लगाएर आ’ त्म’ ह’ त्या गरेकीहुन् । उनि भन्छन्, ‘दिउँसोको समय थियो । म आफ्नो कार्यकक्षमा थिए । छोरीले के काम परेर पवित्रालाई बोलाउन खोज्दा ढोकामा सिरकहरु लगाएर बन्द गरेको देखिछन् । बोलाउँदा पनि नबोलेपछि झ्यालबाट हेर्दा झुण्डिएको अवस्थामा देखेपछि मलाई बोलाईन । म आएर हेर्दा उनि झुण्डिएको अवस्थामा थिईन् ।’
पवित्राका आफन्तहरुले घटना आ’ त्म’ ह’ त्या नभएर ह’ त्या भएको दा’ बी गरिरहेकाछन् । अहिले पवित्राको शब पोस्टमार्टमको लागि त्रिबी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । पवित्राको शब घटनास्थलबाट उठाउनुभन्दा पहिले आफुहरुलाई कुनै जानकारी नै नगराई पोस्टमार्टमको लागि लगिएको आफन्तहरु बताउँछन् । पवित्राका आफन्त प्रताप गुर्धामी भन्छन्, ‘पवित्राको शब उठाउनुभन्दा पहिले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो । मलाई पनि शबको मुचुल्का उठाईसकेपछि जानकारी आयो । घ’ ट’ ना शंकास्पद छ । हामीलाई जानकारी नै नगराई कसरी मुचुल्का उठाईयो? प्र’ ह’ रीले त्यसरी मुचुल्का उठाउन मिल्दैन । प्र’ हरी र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सुनियोजित तरिकाले घटनालाई दबाउन खोजेकाछन् ।’
प्रहरीले स्थानिय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा शब उठाएको बताएको छ । घटनास्थलमा पुगेका प्रहरीका अनुसार पवित्रा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिईन् । तर, घटनास्थलमा पवित्राको शब उठाउने रोहबरमा बसेका वडासदस्य लक्ष्मीमणी भट्टाराईले भने पवित्रा भुईमा घोप्टो पल्टेको अवस्थामा देखेको बताए । उनि भन्छन्, ‘मैले पवित्रालाई झुण्डिएको अवस्थामा देखेको होइन । तर प्रहरीले झुण्डिएको भनेर फोटो खिचेका रहेछन् । ढोका खोल्न खोज्दाखेरी उनि झुण्डिएको होकी भन्ने आशंका छ ।’
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चित्त बुझेन देउवा प्रधानमन्त्री बनेकाे, भन्छन् ‘सत्तारोहण गर्नेहरूको नियत छर्लङ्ग’
प्रधानन्यायाधीश राणाकाे प्रश्न- देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती ?
July 1, 2021 N88
मुख्यमन्त्री राईको निवास अगाडि सरकारी गाडी भित्रै चालक मृत फेला
June 8, 2021 N88
सुकेटार विमानस्थलको नाम रवीन्द्र अधिकारी राख्दा योगेश भट्टराई असन्तुष्ट !